कंगनालाई पिएसओ र कमान्डोसहितका ११ प्रहरीले सुरक्षा दिने ! - Himal Dainik
कंगनालाई पिएसओ र कमान्डोसहितका ११ प्रहरीले सुरक्षा दिने !
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:४९
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत र शिव सेनाका नेता सञ्जय राउतबीच चलिरहेको विवादबीच कंगनालाई ‘वाइ क्याटगोरी’ को सुरक्षा दिइने भएको छ। भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार कंगनाका साथमा अब दुई जना पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) सहितका ११ जना प्रहरीको सुरक्षा दिइने भएको सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीले जनाएको छ।
‘कंगनाको सुरक्षामा पिएसओ र केही कमान्डोहरू सहितको ११ जनाको प्रहरी टोली खटिनेछन्,’ गृह मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनडिटिभीले लेखेको छ।
कंगनाले पछिल्लो समय मुम्बईलाई पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरसँग तुलना गर्दै अभिव्यक्तिहरू दिएकी थिइन्। त्यस्तै अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको मृत्युलाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा लागुऔषध व्यापक प्रयोग हुनेबारे बोलेपछि उनी विवादमा आएकी हुन्।
उनले रणवीर कपुर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल लगायत केही कलाकारले लागुपदार्थ सेवन गर्ने हल्ला चलेको र सम्बन्धित कलाकारले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी यी हल्ला झुटा सावित गरिदिन समेत भनेकी थिइन्।
कंगनाले आफूलाई ‘फिल्म माफिया’ भन्दा मुम्बई प्रहरी बलसँग डर भएको अभिव्यक्ति दिँदै सुशान्तको मृत्युको अनुसन्धान बढ्दै गएको समय प्रहरी बलले बलिउडको ‘ड्रग माफिया’को पर्दाफास गर्न असक्षम रहन सक्ने बताएकी थिइन्।
उनको भनाइपछि शिव सेनाका नेता सञ्जय राउतले कंगनालाई मुम्बई नफर्कन भनेका थिए। सञ्जयले कंगनाको उक्त भनाइलाई निन्दा गर्दै उनलाई ‘धोकेबाज’ भएको र मुम्बईमा बस्न दिए पनि सहर प्रहरी बलको आलोचना गरेको विषय उठाएका थिए।
हाल हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेकी कंगनाले यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ट्विटमार्फत् आफूलाई हरियाणा वा केन्द्र सरकारबाटै सुरक्षा चाहिने माग गरेकी थिइन्।
यही विवादबीच कंगनालाई सुरक्षा दिइने खबर सार्वजनिक भएको हो।
कंगनाले यो खबरसँगै ट्विट गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद समेत दिएकी छिन्।
‘यसले पुष्टि गर्छ की देशभक्तको आवाज फाँसीवादीहरूले कुल्चिन सक्दैनन्। म अमित शाहप्रति कृतज्ञ छु। यदि उहाँले चाहेको भए मलाई केही दिनपछि मात्र मुम्बईमा जान सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले एक भारतकी छोरीको आदर गरेर, मान राखेर, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लाज राख्नुभयो। जय हिन्द,’ उनले ट्विटमा लेखेकी छन्।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार भारतमा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैको सुरक्षाका लागि दिइने सुविधालाई मुख्यगरी तीन भागमा बाँडिएको छ- जेड प्लस (उच्च तह), जेड, एक्स र वाइ। यो सुरक्षा तह सम्बन्धित व्यक्तिको जोखिमका आधारमा तय हुन्छ। यस्तो सुरक्षा प्रायः मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री, न्यायाधीशहरू र उच्च तहका कर्मचारी लगायतलाई प्रदान गरिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिइने भनेको ‘एसपिजी’ सुरक्षा हो जुन गोप्य रहने हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सुरक्षा तह र यसमा खटिने सुरक्षाकर्मी संख्या निम्नानुसार छः
जेड प्लसः ५५ जना
जेडः २२ जना
वाइः ११ जना
एक्सः २ जना।
अघिल्लोदुर्गेशको ‘तिमी यति राम्री किन’ मा अञ्जुको साथ (भिडियो)
पछिल्लोक्यान्सर उपचाररत सञ्जय काममा फर्किए